अशोक दर्जीको दोस्रो गीत सार्वजनिक, हेर्नुहोस भीडीयो !
ऊर्लाबारी - चर्चित बालगायक अशोक दर्जीको दोस्रो गीत ‘झिलमा फुलु’को भिडियो सार्वजनिक भएको छ। ऊर्लाबारीमा एक कार्यक्रमका बीच मेयर खड्ग फागोले ल्यापटपमा भिडियो क्लिक गरेर प्रिमियर गरेका हुन्। भिडियो सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै मेयर फागोले बाल प्रतिभाको पहिचान गराउन गीतले महत्वपूर्ण सहयोग पुर्याउने बताए। युट्युब च्यानलबाट सार्वजनिक गरिएको भिडियोले कोशी भिजन फिल्मले निर्माण गरेको हो। भिडियोमा गायक अशोक दर्जीका साथी भुइकठहरले उर्फ स्माईल धिमालले अभिनय गरेका छन्। गीतको रचना मन्जुल मितेरीले गरेका हुन्। गीतको भावलाई भिडियोले अझ बलियो बनाएको निर्देशक सुमन योञ्जनले बताए। भिडियोमा दिपक न्यौपान, कौशीला राईलगायतले अभिनय ...
प्रताप दासले ल्याए धमाकेदार गित (भिडियो सहित)
काठमाडौं - नेपाल आइडलका सेकेण्ड रनरअप गायक प्रताप दासले अर्को नयाँ गीत सार्वजनिक गरेका छन् । प्रतापको स्वरमा रहेको नयाँ गीत ‘लेखे एउटा’ को म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको हो । हरि पराजुलीको शब्द र सरोज पोखरेलको संगीत रहेको म्युजिक भिडियोमा केदार धितालको निर्देशन छ । भिडियोमा श्रेया कार्की र कमल सिंहको अभिनय छ भने बाल कलाकारका रुपमा बिराज ढकाल र आस्मा परियार छन् । भिडियो https://www.youtube.com/watch?v=VqEUWS_cgsg ...
देवी धर्तिको “मर्छु अब त” सार्वजनीक, हेर्नुहोस भिडियो !
काठमाडौँ - हिक्मत क्षेत्री र देवी धर्तिको लोकदोहोरी गीत “मर्छु अब त” गीतको भिडियो बजारमा आएको छ । अनिल खनालको लय तथा शब्द रहेको गितलाइ विन्ध्यावासिनी म्युजिक प्रालीले बजारमा ल्याएको हो । मायामा पागल भएका मायालु जोडीको प्रेम पछिको विछोडको कठिन परिवेशलाई गीतको भिडियोमा समेटिएको छ । मरुभुमि नारायणले छायाँकन गरेको भिडियोलाई रोशन धितालले सम्पादन गरेका छन । गीतको म्युुजिक भिडियोलाई राज पाठकले निर्देशन गरेका हुन । गीतको मार्मिक भिडियोमा राहुल, पुजा, दिपक, लक्ष्मीको अभिनय देख्न सकिन्छ । हेर्नुहोस भिडियो ! https://www.youtube.com/watch?v=cUXJwpYfamY&feature=share ...
'घुटु घुटु थुक निल्ने भए म' बोलको रोमान्टिक गित सार्वजनिक (हेर्नुहोस भिडियो)
काठमाडौँ - टिका प्रसाईं र शित्तल राज पाण्डेको स्वरमा सजिएको 'घुटु घुटु थुक निल्ने भए म' बोलको रोमान्टिक गित सार्वजनिक भएको छ । अनिल खनालको शब्द तथा संगीत रहेको गीतलाई विन्दबासिनी म्युजिक प्रा.लि. ले बजारमा ल्याएको हो । अनिल राइले निर्देशन गरेको उक्त गीतमा युविन ढुंगाना र रजिना महर्जनले अभिनय गरेका छन् । मधुर बस्नेत र सुजन दाहालले खिचेका उक्त गीतको सम्पादन बिनोद बमले गरेका हुन् । हेर्नुहोस भिडियो https://www.youtube.com/watch?v=oNQjagjH4tw ...